Xildhibaan Jeesow: Markii uu gaarigu qarxayey waan u soo socday – Kalfadhi
Xildhibaan Jeesow: Markii uu gaarigu qarxayey waan u soo socday
Xildhibaan Daahir Ammiin Jeesow ayaa, isaga oo ka warbixinaya qarax maanta loogu xiray gaarigiisa, waxa uu sheegay inuu si dirqi ah uga badbaaday shirqool dil ah. Isaga oo u soo socda inuu gaariga raaco ayuu sheegay Xildhibaanku inuu qaraxu dhacay. “Markii uu soo dhigtay darawalkeygu baabuurka ee aan soo baxay ayaan meel carwa ah ku leexday, isla markiiba anigoo wax waydiinaya ayaa qaraxu dhacay” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Waxa uu sheegay inuu wadihiisii kasoo gaaray qaraxa dhaawac culus, oo ay lugi burburtay. Hase ahaatee, isaga iyo afar ilaaladiisa ah ayuu sheegay ineysan waxba soo gaarin. Nuuca gaarigiisa ayuu ku sheegay inuu ahaa kuwa aan xabbadda karin, balse waxa uu qaraxu dhaawacay dawaralka isaga oo ku jira gudaha gaariga. “Baabuurku waxa uu ahaa mid aan xabbaduhu karin, banaanka ayeyna uga xireen qaraxa, meel xigta lugta darawalka” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Xildhibaanka ayaa, sida uu hadalka u dhigay, waxa uu sheegay inuu u maleynayo in gaariga loogu xiray qaraxa wax yar kadib markii uu gudaha u galay Hoteel Maka al-Mukaramah. “Ma qayaasi karno meesha lagula xiray gaariga qaraxa, kaakiin waxay u badan tahay in lagu xiray markii aan ka dagay kadib, inta loo sheekeeyay darawalka gaariga” ayuu yiri Daahir Amiin Jeesoow. Xildhibaanku waxa uu sheegay in hoteelka uu kasoo baxayey, markii uu gaarigu qarxayey, uu kusoo dhameystay kulan uu kula lahaa odayaal, sida uu hadalka u dhigay.
Golaha Shacabka oo ka shaqeynaya in Miisaaniyadda 2019-ka ay daboosho baahiyo fara badan
Guddiga Maaliyadda oo eed maaliyadeed ku dhoobay Wasaaradda Maaliyadda